Otú na-Your Garden Tools na Great nkebisi - China Richina
Otú na-Your Garden Tools na Great Ọdịdị
Hụrụ n'anya na-ubi? Na ugbo-ewu nnọọ ewu ụbọchị ndị a, e nwere ọtụtụ n'azụ ụlọ na-adịghị nwere dịkarịa ala otu kwachie, ite, ma ọ bụ akpa na ihe na-eto eto na ya. Ma, dịcha, ị na-akwụ ụgwọ a otutu anya gị osisi na ọ bụghị nke ukwuu na ngwaọrụ ị na-eji na-eto eto ha. Trowels, ọgụ, spades, na shọvel iri a ọtụtụ mmetọ n'oge na-eto eto oge, ma ọ bụrụ na ị na-a obere oge ha n'anya, ha ga na-arụ ọrụ mma na-adịru ogologo maka gị.
Tupu anyị na-ekwu banyere n'ogige gia i nwere, na-echeta mgbe ịzụrụ ọhụrụ Gardening Tools na-eji ihe na-elu-edu ngwaọrụ ga-azọpụta gị na-eru uju na ego na n'ikpeazụ. Akwụ obere ụma maka a ngwá ọrụ nke ga-adịru, kama ọnụ ala ngwá ọrụ ga-aka nká na mkpa-anọchi ugboro ugboro. Na mgbe na-eji ha ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị! Dị ka okwu na-aga, mgbe niile i nwere bụ a hama, ihe niile anya dị ka a ntu-ma na-eji a ngwá ọrụ maka ihe ọ na-adịghị e mere na-eme bụ a ngwa ngwa ụzọ imebi ma ọ bụ agbaji ya (na ọbụna imerụ onwe gị na usoro) . A ogologo-edozi shọvel bụghị a crowbar, azụ nke anyụike bụghị a-adọkpụ hama, na a n'aka pruner na-adịghị iji hụrụ site na a otu-anụ ọhịa alaka. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime na ihe gị ugbu a stash ngwaọrụ bụghị ruo, atụle ịzụ ihe kwesịrị ekwesị, na-agbaziri si a na enyi, ma ọ bụ ịgbaziri otu awa ole na ole (a ezi ihe ngwọta maka ọpụrụiche ngwaọrụ ị ga-adịghị mkpa mgbe).
Ozugbo i nwere a set nke ọma Gardening Tools, ebe a bụ 6 mfe ụzọ ịnọgide na-enwe ha, malite na nchekwa!
Chekwaa ha Safely
A wụsịrị bụ ngwá ọrụ kasị mma enyi n'ihi na mgbe n'ụzọ, ọnụ ọgụgụ otu onye iro nke ngwaọrụ bụ ikpughe na ọcha. Adọrọ adọrọ dị ka o nwere ike ịbụ na-ahapụ gị ngwaọrụ ebe ị ga-mkpa ha echi (ma ọ bụ n'izu ọzọ), don`t ime ya! Echekwa gị niile ngwaọrụ a wụsịrị, ụgbọala, ma ọ bụ ọbụna a weatherproof ngwá ọrụ nchekwa unit si n'ogige (a ime igbe akwụkwọ ozi na-eme ka a oké weatherproof stash maka n'aka ngwaọrụ), na ha ga-adịru ọtụtụ ugboro karịa ngwá ọrụ na-eji oge ndị dị na anyanwụ, mmiri ozuzo, na ifufe (ma ọ bụ ina-ezo n'ime ogologo ahịhịa na mgbe ina-agba ọsọ n'elu).
N'èzí nchekwa bụ kasị njọ maka osisi ịṅụ, nke nwere ike roughen, mgbape, gbawara n'etiti, ogologo, na ire ere karịrị oge. The ezigbo ngwá ọrụ nchekwa ebe na-echebe gị ngwaọrụ site na ihu igwe ma na-enye ohere maka ikuku mgbasa, otú ngwaọrụ nwere ike nkụ na nchara na-ebù bụ obere yiri ka ime.
Ala esetịpụ mmiri ma na-agba ume nchara, otú etinye gị ngwaọrụ pụọ dị ọcha ga-enyere ha aka-adịru ogologo. Nke ahụ bụ na-a ezi ụzọ gbochie ibe n'ibe nke ahihia mgbọrọgwụ na osisi ma ọ bụ ala na-ekesa site na ịbụ enyefere ebe ebe. Tupu ị na-etinye gị ngwaọrụ pụọ, asa gawa ọ bụla ala, ma ọ bụ bechapu ya anya na a putty mma (na-otu na onye ọ bụla nke gị ngwá ọrụ nchekwa ebe). Jiri a nkikara akwa (na obere turpentine, ma ọ dị mkpa) wepụ osisi sap na resins si ịcha ngwaọrụ. Nkụ na kpochara ngwaọrụ, karịsịa ọ bụla metal na osisi akụkụ, na ihe absorbent nkikara akwa.
Gbochie Gbasaa Of Disease
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na o doro anya na ọrịa na osisi ihe, idebaihe gị kpochara ngwaọrụ a ngwọta nke ọkara rubbing mmanya na ọkara mmiri maka nkeji ise igbu ọ bụla germs tupu ihicha ngwá ọrụ na-agbanye ha.
Mee ka ha na Sharp
Kasị mma osi ite mara na uru nke a nkọ mma, ma otú ọtụtụ Gardeners na-aghọta na nkọ ngwaọrụ ka ugbo aga-eme ngwa ngwa, mfe, na ụfọdụ ọbụna mma maka osisi? Idebe a ọma ihu na a ọgụ ma ọ bụ n'aka pruner dị mfe ma ga-azọpụta gị oge n'ikpeazụ. Unu chere ruo mgbe gị ngwá ọrụ bụ dull: Chee echiche nke jisie dị ka kwa flossing gị ngwaọrụ!
Malite site na-achọ na nsọtụ nke agụba. Ọtụtụ ngwá ọrụ na-ewepụghị na otu akụkụ na angled (beveled) on agbara n'akụkụ; ndị ọzọ na ngwaọrụ na-angled na abụọ. Ọzọkwa edebe n'akuku nke "bevel." Ọ bụ nkọ na mkpa ka a mma ma ọ bụ bụ nanị ezigbo ihu mụwo na a ọzọ masịrị n'akuku? Nzube gị bụ ịnọgide na-enwe na mbụ nhazi.
Kasị metal ngwaọrụ-erite uru site na mkpa mkpuchi nke mmanụ iji gbochie nchara na-adịghị, ma ọ bụrụ na ha na-mere nke igwe anaghị agba nchara, nke bụ dịghịzi ya. Buru a pụrụ nke linseed mmanụ gị ngwá ọrụ ẹduọk tinyere a adụ nkikara akwa, na-enye gị na kpochara ngwaọrụ a ngwa ngwa ozugbo-ihe karịrị tupu ya etinye ha. Biko don`t were moto mmanụ gị ngwaọrụ! Ọtụtụ ubi akwụkwọ ka nwere ike ikwu ya, ma ị na-chọrọ n'ezie ka a na-moto mmanụ n'ime gị mma ubi ala? M na-don`t.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ ọ bụla nchara, na-eji a waya ahịhịa ma ọ bụ Emery ákwà (ụdị dị ka a ntu file glued ákwà kama katọn ma na-eji metalworkers) wepụ ya. I nwekwara ike na-ete ya pụọ ​​na mmanu mmanu ájá. Buru a sturdy ịwụ jupụtara ájá gwara mmanụ gị wụsịrị, na dị nnọọ ịkpatara kpochara ngwá ọrụ n'ime ájá a ugboro ole na ole. Nke ahụ bụ na-emekarị ihe ọ chọrọ iji ma Polish na mmanụ gị ngwaọrụ n'otu oge.
Ọnọdụ The Osisi ịṅụ
N'oge ruo n'oge itinye a mkpa mkpuchi nke linseed mmanụ nkụ, unpainted osisi ịṅụ na buff anya ọ bụla ngafe na a ọcha nkikara akwa na-esote ụbọchị. A merụsịrị weathered handle ga-amịkọrọ nnọọ a bit nke mmanụ, ya mere, tinye a mkpa mkpuchi kwa ụbọchị ruo mgbe e nwere a obere mmanụ ekpe n'elu na-esonụ ụbọchị. Ọ bụrụ na i nwere ike ịhụ linseed mmanụ na a obodo ngwaike ụlọ ahịa, isi gị obodo eke nri ụlọ ahịa. Flaxseed mmanụ na ị na-esi nri na bụ otu ihe ahụ dị ka linseed oil- "Lin" dị ka "ákwà ọcha," na eriri mere si flax. Nke a bụkwa a ezi ụzọ iji ọ bụla ochie flaxseed mmanụ gị usekwu na mepụtara ihe anya uto.